Cele Gabar - Page 326 of 333 - The World of Celebrity
June 26, 2020	Cele News
ဟန်တီကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော် မော်ဒယ်၊သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ပရိသတ်တွေကို သူ့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို မျှဝေလေ့ရှိပါတယ်။ အခုလည်း သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ယွန်းဝင့်လွှာအောင်နဲ့အတူ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို ပြုလုပ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းကတင် ယွန်းဝင့်လွှာအောင်ရဲ့မွေးနေ့မှာ ကုတင်(၅၀၀)ဆေးရုံကြီးမှာ အလှူပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုလည်း ယွန်းဝင့်လွှာအောင်နဲ့ဟန်တီတို့နှစ်ဦးကတော့ ငှက်လွှတ်ငါးလွှတ်ကုသိုလ်ယူခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်း ပုံလေးတွေနဲ့တကွ ပရိသတ်တွေကို မျှဝေခဲ့တာပါ။ အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားသလို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီး အလှူအတန်းတွေကို ပြုလုပ်ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေကတော့ တကယ့်ကိုလေးစားစရာပါ။ အခုလည်း ဟန်တီနဲ့ယွန်းဝင့်လွှာအောင်တို့ကတော့ တကယ့်ကိုစိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့သူလေးတွေပါပဲနော်… Source : HanThi
နေလင်းကျော်ကတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အာပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ နေလင်းကျော်သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ Cover သီချင်းသီဆိုထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကို ပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နေလင်းကျော်က နာမည်ကြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “နှစ်ယောက်တစ်အိပ်မက်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ကိုယ်တိုင်ဂစ်တာတီးပြီး Cover Song ပြန်လည်သီဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီသီဆိုထားတဲ့ Cover Song သီဆိုမှုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေ နားဆင်လို့ရအောင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကတော့ နေလင်းကျော်ရဲ့ Cover Song သီဆိုမှုကို နားဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ သဘောကျနှစ်သက်ကြောင်းမှတ်ချက်ပေးနေခဲ့ကြပါတယ်။ နေလင်းကျော်ရဲ့ “နှစ်ယောက်တစ်အိပ်မက်” သီချင်း Cover သီဆိုထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက နေလင်းကျော်ရဲ့ ပရိသတ်တွေရော နားဆင်ပြီးကြပြီလား။ …
အချစ်သီချင်းတွေ၊ အသည်းကွဲ သီချင်း တွေနဲ့ ပရိသတ်ကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဆိုတော်ပိုပိုကတော့ ဂီတလောကရဲ့ အခြေအနေတွကို ” မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ဂီတ လောက ဘယ်အချိန် ထိ တောင့်ခံနိုင်မလဲ ? အဆိုတော်တွေဟာ ဟိုးအရင် က အခွေလေးဘာလေးရောင်းရတော့ အရင်းမကြေရင်တောင် နောက်တစ်ခွေ လုပ်ဖို့ အင်အား ရှိကြတယ်။ ဂီတ မှာ အရေး /အတီး producer /Studio / Mixing / Harmony အစရှိသော သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖို့ ကို မနည်းကြိုးစားရပါတယ်။ ကျမလဲ လမ်းဘေး မရောက်တာကံကောင်း ထမင်း အငတ်ခံ ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ တခြား အနုပညာရှင်တွေ အားလုံးလဲ …
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေး အေးမြဖြူရဲ့ ပထမဆုံး ကိုယ်ပိုင်သီချင်းလေးဖြစ်တဲ့ “လွမ်းနေလို့” သီချင်းလေးကတော့ ဒီနေ့မှာထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ဒီသီချင်းလေးကို ထွက်ရှိလာမည့်အကြောင်း အမြည်း ဗီဒီယိုလေးနဲ့ အသိပေးတင်ဆက်လာကတည်းက ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်နေတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းလေးကတော့ အလွမ်းသီချင်းအမျိုးအစားလေးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်ရကျိုးနပ်စေတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေမှာပါ။ အေးမြဖြူက သီချင်းလေးကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတဲ့ ပထမဆုံးသီချင်းလေးဖြစ်တာမို့ ပရိသတ်တွေနားထောင်ပြီးရင် ဝေဖန်အကြံပေးစကားပြောပေးကြဖို့ကိုလည်း စောင့်မျှော်နေကြောင်း ပြောထားပါသေးတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက အေးမြဖြူရဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေအတွက် အေးမြဖြူရဲ့ ပထမဆူံး သီချင်းဖြစ်တဲ့ “လွမ်းနေလို့” သီချင်းလေးကို နားဆင်လို့ရအောင် celeGabar ကနေ မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နားဆင်ပြီးရင် ပရိသတ်တွေရဲ့အကြိုက်နဲ့ရော ထပ်တူကျပြီး ရင်ထဲကိုရောက်ရဲ့လားဆိုတာလေးဖြေပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ ﻿ Chilli …
အလင်းရောင်ကိုတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲက သရုပ်ဆာင်ချက်တွေသာမက သီချင်းတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေကချစ်ခင်အားပေးကြတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဒါ့အပြင်စိတ်ထားကောင်းတဲ့ အလင်းရောင်ကတော့ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း သွားရောက်လှူဒါန်းတတ်တဲ့ စိတ်ထားလေးရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးတော့ အလှူတွေလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို “မနေ့က ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတစုရဲ့ စုပေါင်းအလှူလေးပါ…အခုလိုကာလမှာ တိရစ္ဆာန်ရုံလည်း ပိတ်ထားရတော့ လာလည်တဲ့သူတွေမရှိတဲ့အခါ… သူတို့လေးတွေလည်း အရင်လိုတော့ မစားရရှာဘူးပေါ့…သနားစရာကောင်းတဲ့ သူတို့လေးတွေကို အစာအာဟာရ လှူဒါန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရပါတယ်… တတ်နိုင်သလောက် သွားရောက်လှူဒါန်းဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါရစေ…..” ဆိုပြီးတော့ ပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်မျှဝေထားတာပါ။ တိရစ္တာန်ရုံက တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို စာနာသနားစိတ်ကြောင့် အလင်းရောင်ကတော့ အချိန်ပေးကာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ။ စိတ်ထားကောင်းတဲ့အလင်းရောင်တစ်ယောက် အမြဲလှူတန်းနိုင်ပါစေနော်… Source : ALinnYaung
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် စုံတွဲလေးဖြစ်တဲ့ မိတ်ကပ်ပညာရှင်မေဦးနဲ့ ဟန်လင်းတို့ စုံတွဲလေးကတော့ လတ်တလောမှာ ဆရာတော် ဘုန်းဘုန်း အရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ ကျောင်းမှာ အလှူလေးတစ်ခုသွားရောက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းနဲ့ ကျောင်းရှိသံဃာတော်တွေကို အာရုံဆွမ်းနဲ့ နေ့ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့ပါတယ်။ အခုလို လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကိုတော့ မေဦးက သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ သူတို့ စုံတွဲလေးကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ သာဓုခေါ်ဆိုလို့ရအောင် မျှဝေဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေဦးနဲ့ ဟန်လင်းတို့ နှစ်ယောက်ကတော့ အခုလို ဆရာတော် ဘုန်းဘုန်း အရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ ကျောင်းမှာ အာရုံဆွမ်းနဲ့ နေ့ဆွမ်းကို တစ်လ တစ်ကြိမ်ပုံမှန်ကပ်လှူနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုတစ်ခေါက်မှာဆိုရင်တော့ (၄)ကြိမ်မြောက်ဆွမ်းကပ်အလှူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေဦးနဲ့ ဟန်လင်းတို့ စုံတွဲလေးလည်း နောက်နောင်ဒီထက်မကလှူဒါန်းမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း သူတို့စုံတွဲလေးရဲ့ ဖြူစင်မွန်မြတ်လှတဲ့ အလှူလေးကို …
စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်လုံးနဲ့ ချစ်စရာအပြုံးချိုချိုလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ နာမည်ပျက်မရှိတဲ့အပြင် အနုပညာအလုပ်တွေကိုပဲ အချိန်ပေးရင်း ပရိသတ်အတွက်ကြိုးစားနေသူလေးမို့ အမာခံပရိသတ်အင်အားများသူတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်။ လူချစ်လူခင်ပေါတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ မလိုမုန်းထားသူတွေရဲ့ အပုတ်ချတိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံနေရကြောင်းကို စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ မနေ့ညက ရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။ “စိုးပြည့်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ…fansများ..followerများအားလုံးကိုအသိပေးချင်တာလေးရှိပါတယ်ရှင့်….စိုးပြည့်ရဲ့အကောင့်ကိုcomment ပိတ်ရပါတော့မယ်ရှင့်…ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့..(၆)လ၊(၇)လလောက်ကစပြီး…စိုးပြည့်ရဲ့ယခုaccမှာရော…pageမှာပါ…အကောင့်မျိုးစုံဖွင့်ပြီး..အမေ..ညီမ..မိန်းကလေးများမကြားအပ်တဲ့..မမြင်အပ်တဲ့စကားလုံးများနဲ့..commentရေးပြီး…နှောက်ယှက်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်…အဲ့ဒီထဲကမှအင်မတန်အယဉ်ကျေးဆုံးcommentများသာပြထားပါတယ်… ဒီထက်ဆိုးလွန်းတာတွေကြီးပါပဲ….ဘယ်ကစတာလဲဆိုရင်တော့… စိုးပြည့်နာမည်နဲ့ဘေလ်လိမ်ရာကနေ… fansတွေကစိုးပြည့်မဟုတ်မှန်းသိသွားပြီး….fansများနဲ့ကတောက်ကဆဖြစ်ကြတယ်… အဲ့ချိန်ကစလို့….accမှာရော..pageမှာပါနှောက်ယှက်ခဲ့ပါတယ်… ဘဝမှာတခါမှတော့မကြုံခဲ့ဖူးပါဘူး…ဝေဖန်တယ်ဆိုတာအနုပညာရှင်တိုင်းကြုံတွေ့ရသလိုလက်ခံရပါတယ်… ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုတော့မကြုံဖူးဘူးပေါ့နော်…ဒီပိုစ့်ကိုလည်းစိုးပြည့်မတင်ချင်ပါ…. ဒါပေမဲ့သူအကောင့်အသစ်တွေဖွင့်ပြီး ရိုင်းပျစွာmentတိုင်း စိုးပြည့်အကောင့်ထဲကမိတ်ဆွေများကို အင်မတန်အားနာမိပါတယ်…မဖတ်ဝံ့တဲ့စကားလုံးတွေကြောင့် မိန်းကလေးတစ်ဦးအနေနဲ့ရှက်ရွံ့ပါတယ်… စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိပါတယ်… ဒါပေမဲ့စိုးပြည့် မတုန့်ပြန်ခဲ့ဘဲအေးဆေးစွာနေခဲ့ပါတယ်…. အမြင်မတော်တဲ့commentတွေကိုပဲ ဖျက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်….ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်လို့commentပေးသူများအတွက်comment boxကိုလည်းမပိတ်ခဲ့ပါဘူး….. ရိုင်းပျတာတွေဝင်ရေးမှာစိုးလို့blockလည်းနောက်တစ်ကောင့်နဲ့ထပ်ပြီး နှောက်ယှက်ပါတယ်… ခုပိုဆိုးတာကစိုးပြည့်ပရိုဖိုင်ပုံ.. စိုးပြည့်နာမည်တစ်ပုံစံထဲပြုလုပ်ပြီး… ပရိသတ်တွေရဲ့ကွန်မန့်အောက်မှာရိုင်းပျတာတွေ…ရေးသားတဲ့အတွက်…. တချို့မသိသောပရိသတ်များကစိုးပြည့်ကrpကိုရိုင်းစိုင်းစွာပြန်တယ်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြမှာစိုးလို့.. .စိုးပြည့်comment ပိတ်လိုက်ပါပြီရှင်…. ချစ်တဲ့သူများ..follwersများကိုအလေးထားချစ်ခင်လို့ဒီစာကိုရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်…. အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်… .ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်…စိုးပြည့်ကိုနားလည်ပေးကြပါနော် ကံ..ကံ၏အကျိုးကိုစိုးပြည့်အင်မတန်ယုံကြည်သက်ဝင်ပါတယ်” …
ပရိသတ်အချစ်တော် အကယ်ဒမီ မင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ သရုပ်ဆောင်ပီပြင်လွန်းလို့ ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ အပြင် မိန်းကလေး ပီသပြီးအိမ်မှုကိစ္စတွေကို ကျွမ်းကျင်လို့ ပရိသတ်တွေချီးကျူးမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ မင်းသမီးလေးပါ ။ ဟင်းချက်ဝါသနာပါတဲ့ စိုးပြည့်တစ်ယောက်ကတော့ မကြာခဏဆိုသလို သူမချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းလျာတွေကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ စိုးပြည့်ကသူမတို့ ခြံထဲမှာသီးပင်စားပင်တွေအများကြီးစိုက်ထား တဲ့အကြောင်းကိုစိုးပြည့်ကကန်စွန်းရွက်အရမ်းစားလို့..နေ့တိုင်းလိုလိုကြော်စားတယ်လေ…အဲ့ဒါနဲ့ဘဲ…ခြံထဲမှာစိုက်မယ်..Organic ဘဲစားပါ…အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုပြီး…ခြံထဲမှာကန်စွန်းရွက်ကစလို့..မျိုးစုံစိုက်တော့တာပါဘဲ…ငရုတ်..ချဉ်ပေါင်…မြင်းခွါ..ဟင်းနုနွယ်..ရုံးပသီ…ပင်စိမ်း..နံနံ..ကြက်သွန်မြိတ်..မုန်ညှင်း…ပူစီနံ…ရွက်ယို..မျိုးစုံစိုက်တယ်..မေမေကအပင်စိုက်အရမ်းဝါသနာပါတယ်….သရက်တို့…ငှက်ပျောတို့..ပိန္နဲပင်တောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူမတို့ခြံထဲက သီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထား ပုံလေးကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ စိုးပြည့်ကတော့အပင်စိုက်တာ သိပ်ဝါသနာမပါပေမယ့် ပန်းပင်တော့ကြိုက်တယ် .မေမေစိုက်သမျှခြံထဲဆင်းခူးပြီး ကြော်တော့စားတတ်ပါတယ်နော် ခုလည်းဓါတ်ပုံလေးရိုက်ရင်းကန်စွန်းရွက်ခူးပြီးမှိုနဲ့ကြော်စားလိုက်တယ် ဆိုပြီး ရေးသားထားပါသေးတယ် ။ စိုးပြည့်ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် စိုးပြည့်တို့ခြံထဲက ချစ်စဖွယ် သီးနှံပင်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ Source : …
လူငယ်ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ည ၊ သူစိမ်းအိမ် အစရှိတဲ့ ရုံတင်ကားကြီးတွေနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ထူးပိုင်ဇော်ဦးကတော့ လူငယ်မျက်နှာသစ် သရုပ်ဆောင်တွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မကြာမီမှာ သူရိုက်ကူး ပုံဖော်ခဲ့တဲ့ လရဲ့အောက်ဘက် မိုင်အဝေး ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို ပြသခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ည ရော သူစိမ်းအိမ် ရော နဲ့ မတူတဲ့ အချက်က လရဲ့အောက်ဘက် မိုင်အဝေးမှာ miles away under the moon ဟာ ဆရာမ ဂျူး ရဲ့ ဝတ္ထုဖြစ်ပြီး ‌စာအုပ်ဖတ်ပြီးတဲ့ သူတိုင်းက ဇာတ်လမ်းကို သိနှင့်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ အားလုံးသိနေပြီးတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဒါရိုက်တာထူးပိုင်ဇော်ဦးက ဘယ်လို တင်ပြပုံနဲ့ …
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရဟိတ မင်းသားကြီးလို့တောင် တင်စားရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်ကတော့ ဝေဠုကျော် ဖောင်ဒေးရှင်းကို တည်ထောင်ထားပြီး လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ လိုက်လံလှူဒါန်းပေးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ။ ဝေဠုကျော် ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ အကူညီကြောင့် ခက်ခဲနေတဲ့ဘဝတွေ အဆင်ပြေသွားခဲ့တာလည်း မနည်းပါဘူး ။ ဝေဠုကျော် ဖောင်ဒေးရှင်းက ဇွန်လ (၂၄) ရက်နေ့မှာ ကျူးတဲလေးတွေဆီ အလှူသွားလုပ်ရင်းမျက်စိကွယ်နေတဲ့ အဘိုးတစ်ယောက် ကို သတိထားမိခဲ့ကြပါတယ် ။ သဃ်န်းကျွန်းကျူးတဲမှာ နေထိုင်ကာ မျက်စိကွယ်ခဲ့တာ၂၅နှစ်ရှိခဲ့ ပြီဖြစ်ပြီး အရင်ကအိမ်ထောင်တွေ သားသမီးတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အခုတော့ အဆက်အသွယ်မရှိ အထောက်အပံ့မရှိဘဲ ပတ်ဝန်းကျင် ထောက်ပံ့မှုနဲ့ပဲ တစ်ယောက်တည်းနေထိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ် ။ ကျူးတဲလေးတွေက ဆင်းရဲကြပေမယ့် စေတနာကတော့ကြီးကြပါတယ်။ အဘိုးရဲ့ အိမ်လေးကလဲ ရေမြောင်းပေါ်မှာ …